11 Sọks kacha mma kachasị mma ịzụrụ na 2021 - Ọdịmma
11 Kasị Mma Sọks na-eyi oge oyi a, dị ka Sizzling Online Nyocha
11 Best Heated Socks Wear This Winter
Ọ bụ ogologo ibugo onu mmiri / snowshoe / skai 'ruo mgbe ị ga-alaghachi n'ọkụ ahụ, ị ​​ga-achọ ụfọdụ nkwenye ka ị ghara inwe nhụsianya. Bugharịa otu ụzọ sọks kpụ ọkụ n'ọnụ, ma mee ka mgbasa ozi gị na mkpịsị ụkwụ gị nwee obi ụtọ maka teknụzụ ọhụrụ, akwa na-ebu mmiri na ihe ndị ọzọ na-emepụta. Anyị achịkọtara ndepụta nke sọks kacha mma-enyi na enyi maka sọks maka mkpa gị, site na nke kachasị mma na nke kachasị ọnụ, nke kachasị mma na nhọrọ luxe-mind-luxe.
RELATED: 30 Sweatpants kacha mma maka ụmụ nwanyị n'ihi na ọ dị mma, bụ * N'agbanyeghị anyị
Ọbụna Need Chọrọ Socks Kwesịrị Ekwesị?
Kwadoro site na batrị na-ebugharị na wired maka nkesa ike, sọks kpụ ọkụ n'ọnụ dị ka obere blanket eletriki n'ihi umu-ehi-unu na ukwu-unu. Onye ọ bụla hụrụ ha n'anya karịsịa bụ onye na-etinye ọtụtụ awa n'èzí na snow ma ọ bụ oyi oyi, ma ha na-akụda mkpọda, ụzọ ụkwụ ma ọ bụ naanị na-arụ ọrụ. Na mgbakwunye, ha dị mma ịmịnye mgbe ị na-ehi ụra mgbe ha na-ama ụlọikwuu. Ha dị mma maka onye ọ bụla nwere ọrịa mgbasa, ma ọ bụ ọnọdụ dịka ọrịa ogbu na nkwonkwo ma ọ bụ ọrịa shuga nke nwere ike igbochi mgbasa ozi. Amaghị na ị ga-ahụ na ọ dị ha mma? Tupu etinye ego na ụzọ, ị nwere ike ịzụta mkpọ otu-eji ụkwụ na-ekpo ọkụ ma tinye ha n'ime akpụkpọ ụkwụ gị ma hụ ihe mmetụ ahụ niile na-adị.
Nke kacha mma: Parner nwere akụkụ abụọ na-agba agba sọks
Kacha Mma Na-ele anya: Mmiri A na-ekpo ọkụ Socks Electric Socks Electric Rechargeable Battery Heated Socks
Kacha ọnụ: Uwe mkpuchi ndị na-ekpo ọkụ nke Outamateur maka Womenmụ nwoke .mụaka
Kasị Mma Na-adịte Aka: Jomst 5000mAh Kpụ ọkụ Socks maka Womenmụ nwoke Womenmụ nwanyị
Best Remote Control-nyeere : Dr. Warm Wireless Heated Socks, Ime Ime Obodo
Kachasị mma maka ịma ụlọikwuu : Vipoo Kwadoro Batrị Igwe Igwe Kwesịrị Ekwesị maka Menmụ nwoke na Womenmụ nwanyị
Ngwakọta Cotton kacha mma : Smilodon Akpọkwa Socks, Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu
Nhọrọ Kachasị Mma : Lenz Hecked Socks 5.0 Mkpịsị ụkwụ Cap + Lithium Pack rcB 1200
Nke kachasị mma maka egwuregwu n'èzí : Snow Deer 2020 kwalitere Socks Electric Heated Socks
Kacha mma Top Heating : MMlove Batrị Ndị Ejiri Eke Maka Ndị Nwoke, atedmụaka Ndị Nwanyị Na-eweghachi Egwuregwu Ndị Na-enweghị Ọcha
Kacha mma Iji Disposable Batrị : Igwe Ngwunye Batrị Unisex Na-acha Ọkụ na Black / Yellow
1. Parner Ugboro abụọ Kwadoro Kpụ ọkụ eletrik Socks
Kacha mma n'ozuzu
Uwe sọks a ọnụ ahịa dị mma mere ka ndị ọrụ Amazon nweta 132 akara kpakpando ise, gụnyere otu onye na-egwu mmiri Alpine bụ onye na-akọ 'ha mere ka ụkwụ m kpoo ọkụ ruo ụbọchị dum na mkpọda. M tinyere ọkwa ọkụ na ntọala etiti nke zuru oke maka ogo ogo 10. Ejiri m sọks nke ezigbo sọks ajị ajị dị ka akwa mbụ maka ịcha mmiri. M tinyere ha na njedebe nke ụbọchị ọ bụla ma ebubo ha ma dị njikere ịga echi. Emegharịrị m wires ndị ahụ na bọmbụ m na-agba ọsọ ka m wee ghara ịpị aka na nrụgide ọ bụla mgbe m na-eme ski. Enweghị nsogbu na wires na ala ụkwụ.
Odikwa n’otu nha
2. Spring Shop Heated Socks Electric Rechargeable Batrị kpụ ọkụ Socks
Kacha mma na-ele anya
Ezigbo okwu: Ọ dịghị onye na-azụ otu sọks eletrik dị ka nkwupụta ejiji. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere ekele na sọks ndị a nwere agba asaa, site na oji na isi awọ na-acha akwụkwọ ndụ na pink. Atọ okpomọkụ etoju-arụ ọrụ ruo awa asaa, na dị ka otu onye na-enyocha kwuru, ha 'na-ekpo ọkụ nke ukwuu ma dị mma maka oyi. Nnukwu uru maka ihe m nwetara, na ndị ọzọ yiri ka ha na-enwe obi ụtọ n'ile ha anya. Na-atụ anya iji ihe ndị a na Lake Tahoe n'afọ a!
Dị na nha ọkara na nnukwu
3. Outamateur kpụ ọkụ sọks maka Womenmụ nwoke Womenmụ nwanyị
Ihe nkpuchi sock dị n'ime na akwa na-eme ka ndị a nwee obi ụtọ, ebe batrị ndị a na-ebugharị na-enye awa itoolu nke ọkụ. Otu onye na-enyocha nkọwa kọwara etu enweghị okpomoku ọkụ atọ siri dozie nsogbu ndị ọzọ eji eme mkpịsị ụkwụ ha mere. 'Ọnọdụ nke sock na okpomọkụ kachasị zuru ezu iji kpoo ụkwụ gị ma ọ bụghị ime ka ọsụsọ gbaa ya,' ka ha na-akọ. Ana m eji ha sock ịchụ nta yana ha mere ka ụkwụ m na-ekpo ọkụ. M na-eji ndị na-ekpo ọkụ mkpịsị aka aka mana ndị ahụ ga-adị oke ọkụ ma mee ka ọsụsọ m n'ụkwụ, nke mere ka mkpịsị ụkwụ m na-ajụ oyi mgbe ngwugwu okpomọkụ ahụ ga-apụ.
4. Jomst 5000mAh Kpụ ọkụ Socks maka Womenmụ nwoke Womenmụ nwanyị
Kachasị Okpomọkụ Na-adịte Aka
Otu sọks nwere obi ụtọ nke ji sọks Jomst kwuru, sị: 'sọks ndị a kpụ ọkụ n'ọnụ dị mfe nghọta, ma mee ka ụkwụ m dị mma ma dịkwa ọkụ.' Sọks na-ekwe nkwa awa 25 nke okpomọkụ mgbe otu ụgwọ gasịrị. 'Sọks bụ ihe buru ibu, ya mere ha kwesịrị ịdị ogologo oge. Ihe ndị a ga-adị mma maka mmemme ọ bụla a na-eme n’èzí na ihu igwe oyi, egwuregwu bọọlụ, ịchụ nta, wdg. Onye nyocha ọzọ nwere ekele na sọks na-abịa na kaadị onyinye nke gụrụ 'My Love' ... na anyị kachasị mma na ndị a ga-adị ka onyinye kachasị eche echiche na nke mbụ onye na-ebu ụzọ wee banye na oyi na-atụ ụkwụ.
esi ewepu isi nkwọcha
5. Dr.Warm Ikuku Njọ Ikuku sọks, Ime Remote Control
Kacha mma Remote Control nyeere
'Ahụrụ m isi nwatakịrị ahụ n'anya!' Otu onye bụbu onye na-arịa ọrịa oyi na-ekwu, bụ́ onye toro ịdị mma nke ihe a na-ahụ anya, nke na-ewe ọnọdụ okpomọkụ atọ dị iche iche na ike iji kpoo ụkwụ gị ọkụ n’ime sekọnd 30, tiri mkpu. Otu onye na - ahụ maka ịnụ ọkụ n’obi na - akọwa ihe kpatara isi ihe ọhụụ ji dị mma, nke ọma, igodo : 'Onye chọrọ ịga n'okpuru uwe atọ na oge oyi iji gbanye igwe ọkụ gị?' Ejiri owu, acrylic, naịlọn na spandex, ihe sọks ndị a na-enweghị n'ọtụtụ ha na-eme na fuctionality-to-11 hour.
6. Vipoo Kwadoro Batrị Igwe Igwe Kwesịrị Ekwesị maka Menmụ nwoke na Womenmụ nwanyị
Kachasị mma maka ịma ụlọikwuu
Onye na-enyocha ihe na-enye akara akara a nke sock dị ka enyemaka ụra mgbe ị na-ama ụlọikwuu, n'ihi na mgbe ọ rịgoro n'ime akpa ụra ya, ọ na-enwe mmasị inwe mkpịsị ụkwụ dị mma, mana ọ chọghị ịmepụta ahịhịa site na iji ọkụ na-ekpofu ọkụ. Kama nke ahụ, ọ gbanwere sọks ndị a niile: 'Anọ m n'etiti ụmụ nwanyị 8 na 8.5 [nha] yabụ ndị a pere mpe ma ọ bụrụ na m tinye ikiri ụkwụ ahụ n'ebe kwesịrị ekwesị. Ma, m na-ebuli ha elu ma ha na-arụ ọrụ dị ukwuu maka ihi ụra. ' ọ na-ekwu. Sọks ndị a na-abịa na akpa akwa ha ka ha wee chekwaa wiwi sock mgbe ha na-asacha na eriri na-akwụ ụgwọ nwere chaja abụọ n'ime otu eriri ka ị wee nwee ike ịgba batrị abụọ n'otu oge.
7. Smilodon Nkpu Okpomoku Ekpere, Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Kwesịrị Ekwesị
Ngwakọta Cotton kacha mma
Ọ bụghị onye na-akwado ya nke sọks ajị anụ? Ngwakọta a na-acha polyester-elastane bụ ụzọ ọzọ dị irè, a na-erekwa anyị mgbe anyị gụsịrị akụkọ banyere otu onye ọrụ nke si na mkpịsị ụkwụ mkpịsị aka ya rụchaa mgbe ọ rụchara ọrụ elekere 12 n'èzí na oge 30-n'okpuru Canada: 'Tinye ihe ndị a dị ebube. Ahapụrụ m ụkwụ m ka na-ajụ oyi, ma bụrụ m ụfụ nso na-egbu mgbu tupu m gbanye ha na nke mbụ ya. Enwere m nsogbu na nso ákwá, ruo ọtụtụ afọ, m ka na-eme ihe banyere ụkwụ oyi m. Ma ọ gaghị aba ọzọ, ebe ọ bụ na okpomọkụ sitere na okpu mkpịsị ụkwụ ya na akụkụ sọks nke sọks a kpoo wee kpoo ụkwụ ahụ dum-n ’ihe dị ka nke abụọ.
Dị na Obere, Ọkara na Nnukwu
8. Lenz Hecked Socks 5.0 Mkpịsị ụkwụ Cap + Lithium Pack rcB 1200
Nhọrọ Kachasị Mma
'Ngwa ekwentị nwere ntọala nke sitere na 0-10 maka ọkwa nke okpomọkụ ịchọrọ,' ka otu onye ahịa nwere afọ ojuju na-ekwu. 'Sock anaghị ekpo ọkụ naanị mkpịsị ụkwụ gị, kama ọ bụ gburugburu ụkwụ gị.' Sock — nke nwere ọdịiche nke ịkwado otu egwuregwu Ski Olympic na obodo ya, Austria - nwere ntọala etiti oge ị nwere ike ijikwa site na Bluetooth. Ma, dị ka sọks kachasị mma-sọks ihu igwe, a na-agbakwunye ụzọ abụọ ọ bụla iji gbochie iyi na akwa mgbe ha nwere ntụsara ahụ.
Dị na nha Obere na X-Nnukwu
9. Snow Deer 2020 kwalitere Socks Electric Heated Socks
Nke kachasị mma maka egwuregwu n'èzí
Footkwụ niile dị n'ihu na otu ụdị sọks ndị a nwere ihe na-ekpo ọkụ nke gbara ya gburugburu, batrị batrị dị na sọks nwere mgbatị siri ike-yabụ batrị gị agaghị efe efe ọbụlagodi na akpụkpọ ụkwụ gị ma ọ bụ buut gị na-eme. Ihe ọzọ gbakwunyere, dị ka onye ọrụ si kwuo, bụ atụmatụ ọkụ: 'Ọcha ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na ọkụ ọkụ bụ BRIGHT. Ọ dị ka ịnwe ọkụ ọkụ tinye na ikpere gị-nke bụ ihe mara mma maka onye ọ bụla chọrọ iji ụlọ mposi n'etiti abalị-ọ dịghị mkpa ịgbanye ọkụ ọ bụla. '
Odikwa na nha S rue X-Large
10. MMlove Batrị Ndị Ejiri Eke Maka Umu nwoke, Socks Socks Women Rechargeable Whable Socks Socks
Kasị Mma-Kpo oku
Ọ bụ ezie na ọtụtụ sọks 'ihe ndị na-ekpo ọkụ dị na mpe ụkwụ ma ọ bụ mkpịsị ụkwụ, a na-eme ụzọ abụọ a ka ọ si n'ebe ọzọ pụọ. 'Sọks na-ekpo ọkụ n'ihu n'ihu, ọ bụghị na ala. n'ihi ya, ị gaghị abanye na kpo oku, 'ka otu onye ọrụ na-ekwu, onye gara n'ihu na ndị a bụ' naanị ihe mere ka ụkwụ m kpoo ọkụ n'oge njem na Yellowstone. ' Ndị ọrụ na-akọ banyere okpomọkụ na-adịgide ruo elekere asatọ na sọks a, nke nyere 85 pasent nyocha ise.
Dị na Ọkara
Bed Bed & Na karịrị
11. Action Heat Unisex Batrị Ndị Ejiri Akpọọ Ogwu na Black / Yellow
Kacha mma Iji Disposable Batrị
Ọ bụ ezie na sọks ndị kpụ ọkụ n'ọnụ na-eji batrị ndị nwere ike ịgbanye ọkụ, ọ bụrụ na ịchọghị ichegbu onwe gị na icheta ịkwụghachi ha tupu otu ụbọchị na mkpọda ahụ, họrọ sọks nke ActionHeat, nke na-eji batrị AA abụọ maka sọks ọ bụla. Otu sọks kwuru 'sọks ndị a nwere ezigbo ọkụ nke m hụrụ n'anya. Naanị ihe m ga-eji dochie batrị bụ. '
Zụta ya ($ 44)
Odikwa na Large / XL ma obu XXLarge
Njikọ: 18 Obi-Goodtọ Dị Mkpa (Gụnyere Fitness Gear) Ndị Ekelere tore na 2021
nne ụbọchị onyinye 2017
eji mmiri soda maka anụahụ
n'ihu ịkpụ ntutu ụzọ maka nwa agbọghọ
ịkpụ ntutu maka nwa agbọghọ ihu oval
ihe ndi China menu nri